Farmaajo oo si farsamaysan uga noqday qorshiihii 13ka kursi ee Gobolka Banadir - Muqdisho Online. Caasimada Muqdisho
Home Wararka Farmaajo oo si farsamaysan uga noqday qorshiihii 13ka kursi ee Gobolka Banadir
MW Farmaajo oo khabiir ku noqday sida loo jahawareeriyo mucaaradka dowlada, gaar ah kuwa ka soo jeeda degaanka Gobolka Banadir oo ayan siyaasaduba u bilaawneen, ayaa horay ugu sameeyay shacabka gobolka Banadir balan-qaad been ku salaysnaa oo uu ku doonayay in uu ku kala jabiyo mucraaradka dowlada Goboleedyada isla markaana uu ku baalsheegto dadka ku dhaqan Gobolka Banadir, ayaa taageeray 13ka kursi ee la sheegay in loo qorsheeyay in gobolka Banadir laga siiyo Aqalka Sare.
Farmaajo waxa uu ku faanay in uu yahay madaxweynhii ugu horeeyaya ee aqqonsada xuquuqda Gobolka Banadir. Nasiib xumo kooxo isku sheegayo siyaasiyiin ama aqoonyahano ka soo jeeda Gobolka Banadir ayaa durbadiiba bilaabay in ay u mahadcelinayaan Farmaajo, iyaga oo ka dhigayo in Farmaajo kuraas siyayay Gobolka Banadir.
Habeenadii u danbeeysay oo uu Farmaajo kulan qadka taleefanka ah uu kula-galay Madaxweyne Saciid Dani iyo Axmad Madoobe ayuu u sheegay in uu dib uga laabtay arintii kuraasta la doonayo in laga siiyo Gobolka Banadir Aqalka Sare, sidaas darteenda si farsamaysan looga noqon doono go’aanka codeyntii Baarlkamaanka ee 13ka kursi.
Hadaba Farmaajo ayaa ku wargaliyay Guddoomiyaha Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh in uu la yimaado fasamo dib looga noqonayo codeyntii Baarlamaanka. Gudoomiye Mursal ayaa Xeerkii metalaadda Gobolka Banaadir u bedelay waxa uu ku sheegay Qaraar ama Baaq, una kala diray xukuumadda iyo labada Guddi ee dib u eegista Dastuurka.
Qoraalka ka soo baxay Guddoomiye Mursal 27-kii June 2020 oo ku socday Wasaaradda Dastuurka xukuumadda Soomaaliya, Guddiga labada aqal ee Baarlamaanka u qaabilsan dib u eegista Dastuurka iyo Guddiga kale ee madaxa bannaan ee dib u eegista Dastuurka, ayaa Xeerka metelaadda G/Banaadir looga dhigay Qaraar kasoo baxay Baarlamaanka Federaalka.
Dhanka kale qoraalka oo sidoo kale la ogeysiiyey Madaxweynaha iyo Ra’iisal wasaaraha ayaa lagu caddeeyay inuu dhaqan gelayo marka uu saxiixo Guddoomiyaha Baarlamaanka Maxamed Mursal Sheekh, iyadoo su’aalo sharci iyo shaki badan ka dhasheen sida guddoomiyaha Baarlamaanka arrintan u wajahay.
Talabaadan ayaa ah mid si farsamayn uu Farmaajo uga baxay balantii uu la galay shacabka Gobolka Banadir. Iyada oo gudomiye Mursal soo saaray qoraal noocaan ah ayaa Gudoomiye Cumar Filish oo aad moodo in uusan la socon siyaaadda dalka waxa uu xalay u sameeyay xildihibaanada Fedaraalka xaflad mahadnaq ah! oo muxuu uga mahadnoqoy?
Halkaan ka aqrsio qoraalka ka soo baxay Gudoomiye Mursal.
Previous articleSheekh Shariif “Doorasho kaligaa aad ogtahay oo aad miiska soo saareyso ma shaqeyneyso”
Next articleEight years after bombing, Somalia reopens national theatre